OEM सेवा - हेबै ललित कला कं, लिमिटेड
तपाई उत्तम हुनुहुन्छ
निजी लेबल (OEM सेवा) आज यहाँ व्याप्त लोकप्रिय प्रचलन मध्ये एक हो! र, यसको लागि कसले राम्रो वर्णन गर्न सक्दछ? You! जब तपाईं भगवानको सर्वश्रेष्ठ उत्पादन हुनुहुन्छ, त्यसोभए तपाईं आफैंलाई किन एउटा अर्कोमा बेच्नुहुन्छ? तपाईं विशेष सेवा पाउन योग्य हुनुहुन्छ र भन्नोभा तपाईंको व्यवसायको लागि निजी लेबल eyelashes बनाउनको लागि सबै भन्दा राम्रो सिफारिश हो।
eyelashes निजी लेबल (OEM सेवा)
यो अप्रिय विवादित हो कि निजी लेबल बरौनी प्याकेजिंग एक ब्रान्डको लागि महत्वपूर्ण छ, त्यसैले यदि तपाईं हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई सबैलाई बाध्यकारी र विशिष्ट प्याकेजि create सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछौं। विशेष डिजाइन टोलीले तपाईंलाई एक नाजुक प्याकेजि .को ग्यारेन्टी गर्दछ, र हाम्रो डिजाइन सेवा तपाईंको बल्क अर्डरको लागि निःशुल्क हो। हाम्रो प्याकेजि highले उच्च गुणको आनन्द लिन्छ किनभने यी सबै डिजाइनहरूले आधुनिक फ्याडलाई सन्दर्भको रूपमा प्रयोग गर्दछ साथै हामीसँग धेरै प्याकेजिंग प्लान्टहरू र प्रिन्टिंग कारखानाहरूसँग नजिकको र सद्भाव सहयोग सम्बन्ध छ जुन हालको घरेलु प्रथम श्रेणी, अन्तर्राष्ट्रिय अग्रणी हार्डवेयर कन्फिगरेसन र उत्पादन क्षमताको गठन गर्दछ। धेरै वर्षको लागि प्याकेजि materials सामग्री।
निजी लेबल बरौनी विस्तार निजी लेबल बरौनी हम निजी लेबल बरौनी विस्तार र बरबै प्याकेजिंग शैलियों को विभिन्न प्रकार को हावी छ र तपाइँ तपाइँलाई जे छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाइँको पक्ष को कुनै प्रकार छैन भने, तपाइँ के चाहानुहुन्छ वर्णन गर्न केही विशेष जानकारी बताउन सक्नुहुन्छ, र हाम्रो ग्राफिक कलाकारहरू तपाईंको कम्पनीको लागि काम गर्ने कस्टम प्रोग्राम सिर्जना गर्न उनीहरूको मार्गबाट ​​बाहिर जान्छन्। हामी गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्छौं र हामीले बेचिएका सबै प्याकेजि of्गको राम्रो बिक्रीको सेवा प्रदान गर्दछौं। हामीले धेरै ग्राहकहरूलाई उनीहरूको सफलताको ब्रान्ड सेटअप गर्न मद्दत गरेका छौं र हामी सक्दो प्रयास गरेर तपाईंको सेवामा समर्पित गर्दछौं। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्, हाम्रो टीम तपाइँसँग काम गर्न जान तयार छ।
निजी लेबलको प्रक्रिया
(१) पहिले, तपाईलाई बल्क अर्डर पुष्टि गर्न आवश्यक छ;
(२) त्यसोभए हामीलाई तपाईंको प्याकेजिंगको प्रकार बताउनुहोस् र तपाईंलाई मनपर्ने डिजाईनको विचारहरू, हामी तपाईंको ग्राफिक्स कलाकारहरूको लागि पेश गर्नेछौं र डिजाइन मिलाउने;
()) हामीसँग तपाईंको सन्दर्भको लागि कम्तिमा design डिजाइन योजनाहरू हुनेछन्। तपाईलाई मनपर्ने सब भन्दा उत्तम छनौट गर्नुहोस् र हामीलाई भन्नुहोस् यदि तपाईंलाई कुनै समायोजन चाहिन्छ भने;
()) हामी तपाईंसँग पुष्टि गर्न संशोधित डिजाइन पठाउनेछौं;
()) यदि तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने, हामी प्रिन्टिंग कारखानाको लागि ट्रिपल चेक पछि प्रिन्टिंग फाइल बनाउँदछौं। मुद्रण कारखाना बल्क उत्पादन पुष्टि र व्यवस्था गर्नेछ;
()) हामी अन्तिम ल्याश बक्स पाउँछौं र तपाईंको ल्याशहरूसँग प्याक गर्दछौं, त्यसपछि तपाईंलाई पठाउँदछौं।